Eritrea: Ethiopian Airlines gosipụtara udo site na njem nlegharị anya taa
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Eritrea: Ethiopian Airlines gosipụtara udo site na njem nlegharị anya taa
Taa Ethiopian Airlines kwupụtara na ọ rutere na Asmara, agbata obi Eritrea, na ụgbọ elu VVIP nke Onyeisi Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister nke Federal Democratic Republic of Ethiopia.
Mgbe anyị na-eme ọmarịcha ụbọchị a n’akụkọ ihe mere eme, anyị na-achọ ihe kachasị mma nke udo, ọbụbụenyi na ọganihu maka ndị Eritrea na ndị Etiopia.
Anyị na-ele anya ọ bụghị naanị ijikọ Eritrea na Etiopia kamakwa iji jikọọ Eritrea na ihe karịrị mba 114 na mba ụwa na mpaghara 5 na ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ.
Obodo Badme nke dị nso na Etiopia bụ ebe agha dara na 1998 n'etiti Etiopia na Eritrea, were afọ abụọ wee bibie mba abụọ ahụ.
Kemgbe obodo ahụ ka dị, n'agbanyeghị ọgba aghara ya, ọdịdị na-enweghị isi, akara ngosi akara ngosi maka mba abụọ ahụ, ọkachasị n'ihi n'agbanyeghị nkwekọrịta mba ụwa Algiers Peace nke soro nsonye 2000, wee duga mkpebi na Badme laghachi Eritrea, Etiopia nọgidere na-agbasi ike ịnọ n'obodo ahụ.
N'ihi ya Badme ghọrọ ihe na-akpata esemokwu n'ime afọ ndị ghọrọ afọ iri, ya na gọọmentị Etiopia na Eritrea na-abịarị ibe ha asị, ebe ndị niile nọ n'ókè mba ahụ nọgidere na-ese okwu, ndị agha nke ọ bụla na-ele ndị ọzọ anya.
Na mberede na mmalite nke June, Etiopia kwupụtara njikere ya iji kwenye ma mejuputa nkwekọrịta Algiers Peace, otu n'ime ọtụtụ mgbanwe mgbanwe a na-enwetụbeghị ụdị afọ a, nke na-egosipụtaghị ihe ịrịba ama nke ịbelata ebe ọ bụ na nhoputa Eprel nke praịm minista ọhụrụ nke kwere nkwa iwere Etiopia na nduzi ọhụụ nke ọchịchị onye kwuo uche ya.
Gọọmentị Etiopia kwupụtakwara na ọ ga-anabata nsonaazụ nke mkpebi gọọmentị nke oke oke nke 2002, nke nyere mpaghara esemokwu a na-akpọ Yirga Triangle, na njedebe nke Badme, ruo Eritrea.
Algiers Eritrea Ethiopia Ụgbọ elu Etiopia
Nri na Qatar Airways mgbe akụ na ụba na-efe efe: Dị ụtọ ma ọ bụ na ọ bụghị?
Na-akwụsịghị Chicago na ụgbọ elu Atens: Gịnị ka anyị na-eche?